Misaona ny sainam-pirenena ho an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra
auteur jona 27, 2016 Commentaires fermés
Misaona ny sainam-pirenena ho an’ny Kaominina Antananarivo-Renivohitra, io no fanapahan-kevitra noraisin’ny ao amin’ny Kaominina, nandritra ny fananganan-tsaina isaky ny alatsinainy fanaon’ny ao amin’ny Fiadidiana ny Tanàna. Izany no atao, manoloana ny zava-nitranga, asa fampihorohoroana
Fiaraha-miasa Pompiers Malagasy-Kanadiana
auteur jona 13, 2016 Commentaires fermés
Nifarana ny 10 Jona 2016 teny Tsaralalana ny fiofanana nataon’ny Vondron’ny Mpamonjy Voina eto Antananarivo-Renivohitra. Ny Sampana mpamonjy voina kanadiàna avy niofana 3 taona tany amin’ny Kôlejy Montmorency no nanofana azy ireo nandritra ny
Fandaminana ny tanàna ifarimbonan’ny CUA sy ny EMMO REG
auteur jona 10, 2016 Commentaires fermés
Nitohy ny zoma 10 jona tamin’ny 5 ora maraina ny asa fanadiovana sy fandaminana ny Araben’ny Fahaleovantena sy ny faritra manodidina azy. Teny Soarano, Behoririka, Tsiazotafo, Petite Vitesse, Arcade Analakely ary Pochard no nanatanterahana
Fiaraha-miasa eo amin’ny Mpamonjy Voina malagasy sy kanadiàna
auteur may 31, 2016 Commentaires fermés
Nahazo fitaovana sy kojakoja ary fanafody fampiasa amin’ny vonjitaitra avy amin’ny Mpamonjy Voina kanadiàna ny Vondron’ny Mpamonjy Voina eny Tsaralalana. Tonga nanolotra izany ny alatsinainy tolakandro teo ny Capitaine BERNARD CHRISTIAN, izay mitarika ny
Trano nirodana teny Ambatonakanga
auteur may 5, 2016 Commentaires fermés
Trano iray teny Ambatonakanga (Boriborintany Voalohany), eo ampitan’ny «Immeuble Flamboyant», no nirodana ny marainan’ny Alarobia 04 may 2016, tokony ho tamin’ny 6 ora sy sasany. Tsy nisy naratra na aina nafoy. Vokatry ny asa
Fiadidiana ny tanànan’Antananarivo renivohitra: Fankalazana ny fetin’ny paska
auteur martsa 25, 2016 Commentaires fermés
Polisy Monisipaly Efa manakaiky izao ny andro izay hankalazan’ny mpino kristianina ny fetin’ny Paska. Maro araka izany ireo olona izay handeha hamonjy fiangonana sy toeram-pilanonana ary toeram-pitsangatsanganana maro samihafa mandritra ny herinandro masina, ny
Vonona hiatrika ny loza voajanahary ny Kaominina Antananarivo
auteur martsa 2, 2016 Commentaires fermés
Ho tohin’ny fampiofanana ny fihatrehana ny loza voanjanahary izay natao farany tetsy amin’ny « Astauria » Antanimena dia mbola nitohy ny 01 marsa 2016 lasa teo indray izany, izay notontosaina teny amin’ny Hotel « le PAVE » Antaninarenina.
Fanadiovana Analakely : Fikasihan-tànana Polisy Monisipaly
auteur janoary 21, 2016 Commentaires fermés
Mbola mitohy hatrany ny fanadiovana ireo mpivarotra amoron-dàlana ao Analakely sy ny manodidina ary tsy hihemotra mihitsy amin’izay fanapahan-kevitra izay ny avy eto anivon’ny Fiadidiana ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra. Raha nanatanteraka ny asany àry ireto
Behoririka : May ny tranom-barotra GOLDEN CENTER
auteur desambra 16, 2015 Commentaires fermés
Ny Alatsinainy 15 Desambra tokony ho tamin’ny efatra ora teo ho eo dia nirehitra ny tranom-barotra « Golden Center » tetsy Behoririka. Araka ny voalazan’ireo olona nanatry maso dia fanaovana ‘soudure’ izay nataon’ny teratany
POLISY MONISIPALY: Fiatrehana ny fetin’ny Noely am-pilaminana
auteur desambra 14, 2015 Commentaires fermés
Manomboka ny 14 Desambra 2015 ka hatramin’ny 03 Janoary2016 dia miasa tsy an-kijanona eto anivon’ny faritra Antananarivo Renivohitra ireo Polisy Monisipaly mba hiatrehan’ny vahoaka tsirairay ny fetin’ny Noely sy ny taona vaovao am-pitoniana sy